यसपालि दसैं बजारमा कस्तो लुगा चलेको छ? :: जुना श्रेष्ठ :: Setopati
यसपालि दसैं बजारमा कस्तो लुगा चलेको छ?
यी हुन् कुर्ताका सदाबहार ५ डिजाइन
काठमाडौं, असोज १९
दसैं नजिकिएसँगै कपडा पसलहरूमा मान्छेको घुइँचो हुन्छ। ठूला सपिङ मलका पसलदेखि फुटपाथ बजारसम्म।
पोहोर दसैंमा कोरोना महामारी चरम भएकाले बजारमा चहलपहल धेरै भएन। त्यसैले व्यापार नभएको व्यवसायीहरूको गुनासो थियो। यसपालि कोरोना अलि मत्थर भएकाले ग्राहक बढेका उनीहरू बताउँछन्।
'पोहोरभन्दा यसपालि खुद्रा बिक्रेता र ग्राहक बढेका छन्,' न्युरोडस्थित चकलेट ट्रेडर्सका सञ्चालक चन्द्रमा पुनले भनिन्, 'तर मागअनुसार आपूर्ति गर्न सकिरहेका छैनौं।'
होलसेल र खुद्रा व्यापारीले कपडा आयात समस्या भोगिरहेका छन्। यो समस्या कोरोना महामारी फैलिनुअघि पनि थियो। महामारीपछि थप झन्झटिलो बनेको हो।
'विभिन्न सरकारी प्रक्रियाका कारण सामान आइपुगेको छैन। नाकामै रोकिएको छ। अरू सामानभन्दा कपडा आयात गर्न समय लाग्छ। नयाँ डिजाइन र फेसनएबल कपडा मगाएका थियौं। अझै आइपुगेको छैन,' उनले थपिन्।
यतिबेला उनीहरूले खुद्रा व्यापारीलाई समेत पुरानै स्टकका कपडा बिक्री गरिरहेका छन्। तर तोकिएको समयमा नभित्रिँदा कपडाको फेसन, ट्रेन्ड र मौसमै परिवर्तन हुने चन्द्रमा बताउँछिन्।
व्यंग्यात्मक हुँदै भनिन्, 'अब गर्मीको लुगा जाडोमा अनि जाडोको गर्मीमा लगाउनु पर्छ!'
विशेषगरी महिलाका लुगाफाटाको फेसन र ट्रेन्ड निकै छिटो परिवर्तन हुने उनी बताउँछिन्। यस्तो परिवर्तन भइरहने बजार र फेसनलाई उनी 'फ्ल्यास फेसन' भन्छिन्।
चन्द्रमाको भनाइमा सहमत छिन् महाराजगञ्जस्थित मिनाक्क्षी कलेक्सनकी कर्मचारी देविका खड्का।
महिलाहरूको फेसन चाँडो-चाँडो फेरिरहन्छ। उनले उदाहरण दिँदै भनिन्, 'जस्तै पोहोर सिंगल टप धेरैको रोजाइमा परेको थियो। यसपालि सेटको टप परेको छ।'
मिनाक्क्षी कलेक्सनमा महिलाको साडी, कुर्ती जस्ता 'परम्परागत' कपडा पाइन्छ। विशेष चाडपर्व अवसरमा हरेक उमेरका महिलाले यस्ता कपडा खोज्ने देविकाको अनुभव छ। सामान्य बेला जिन्स, टिसर्ट, वान-पिसजस्ता कपडा लगाउने महिला पनि चाडपर्वमा कुर्ती-सारी खोज्दै पुग्ने उनले बताइन्।
देविकाका अनुसार यसपालि बजारमा सेट टप, प्लाजो सेट, प्रिन्टेड कुर्ती र धागोले बुट्टा भरिएको कुर्ती खुब चलेको छ। सेट टप भन्नाले कुर्तीसँगै मिल्ने सुरूवाल र सल पनि पर्छ।
प्लाजो सेट पनि कुर्ती नै हो तर यसको सुरुवाल खुकुलो हुन्छ। टपक्क परेको सुरुवालभन्दा प्लाजो लगाउन सहज हुनाले केही समयदेखि यो धेरैको रोजाइमा पर्दै आएको छ।
ट्रेडिसनल एलेका सञ्चालक एवम् फेसन डिजाइनर रेनु श्रेष्ठले गत वर्ष यसबारे सेतोपाटीसँग कुरा गरेकी थिइन्। उनका अनुसार प्लाजो निकै सजिलो र हेर्दा क्लासिक देखिनाले प्रायः अफिस जानुपर्ने महिलाको रोजाइमा पनि पर्दै आएको छ। यस्तो कुर्ती शरीरको नापअनुसार फिटिङ हुन्छ भने सुरूवाल खुला हुन्छ। यसमा सल वा स्कार्फ लगाए पनि हुन्छ, नलगाए पनि। रोजाइ लगाउनेकै!
त्यस्तै कपडाको बुट्टाको कुरा गर्दा, देविकाका अनुसार प्रायःले धागोले बुनेको वा केही छापिएको (प्रिन्टेड) कपडा रूचाउँछन्। यसपालि ट्रेन्डमा अम्ब्रेला कुर्ता पनि भएको उनले बताइन्। अम्ब्रेला कुर्ता कम्मरभन्दा मुनि घुँडासम्म फरर जामाजस्तै हुन्छ। यस्तो डिजाइनको कुर्ता लगाउँदा सजिलो र स्टाइलिस पनि देखिन्छ।
चाडपर्वमा कुर्ती, साडी, लेहेंगाजस्ता परम्परागत कपडाको माग बढ्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
विगत सात वर्षदेखि रुबीज कलेक्सनमा कार्यरत गिता थापाको पनि यस्तै भनाइ छ। उनी भन्छिन्, 'चाडपर्वमा हरेक उमेरका ग्राहकले परम्परागत शैलीकै लुगा खोज्ने हुनाले कपडा बिक्री केही प्रतिशतले बढ्छ।'
रुबीज कलेक्सनकी सञ्चालक नेपालकी पहिलो मिस नेपाल रुबी राणा हुन्। उनी पनि कपडा प्रचारका लागि टिकटक, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन्।
चाडपर्वमा परम्परागत शैलीका कपडाले बजार लिए पनि विशाल बजारको एलिगेन्ट फेसनमा भने विशेषगरी किशोरी लक्षित प्यान्ट, सर्ट, जुत्ता, चप्पल, ब्याग पाइन्छन्। यसका सञ्चालक लक्ष्मी सापकोटा क्षेत्रीका अनुसार कोरोना सुरू हुनुअघिका वर्ष राम्रो व्यापार हुन्थ्यो। विगत दुई वर्षदेखि भने व्यापारमा कुनै सुधार छैन।
उनले भनिन्, 'हामीलाई त अझै दसैं आएजस्तो भएको छैन। पोहोर घटस्थापनादेखि सप्तमीसम्म अलिखलि व्यापार फस्टाएको थियो। यसपालि के हुन्छ भन्न सकिन्न।'
असन चोकमा फुटपाथ पसल राख्दै आएकी मीना कुमारी भने पोहोरको तुलनामा यसपालि राम्रो व्यापार भएको बताउँछिन्। उनी महिलाले लगाउने कुर्ती बेच्छिन्।
व्यापार भए पनि नयाँ डिजाइनमा कपडा राख्न नपाएको उनको भनाइ छ।
'पहिलेभन्दा यसपालि ग्राहक बढेका छन्। तर भनेजस्तो कपडा राख्न पाएका छैनौं। होलसेलमै कपडा छैन भन्छन्,' उनले भनिन्, 'तै पनि पोहोरभन्दा यसपालि दसैं खर्च उठ्छ भन्ने छ।'
लगाउन छरितो र सजिलो, ट्रेन्डी र क्लासिक लुक पनि दिने भएकाले कुर्ती धेरैको रोजाइमा पर्छ। बर्सेनि बजारमा सयौं डिजाइनका कुर्ती भित्रिन्छन्। हाम्रो बजारमा कुन डिजाइन चलिरहेको छ, भन्नै सकिँदैन।
समयअनुसार जे जसरी आए पनि ट्रेन्ड र फेसनबाट सजिलै नबाहिरिएका कुर्तीका यस्ता केही सेट छन्, जसको हामीले यहाँ चर्चा गरेका छौं।
१. प्लाजो सेटः
व्यवसायीहरूका अनुसार लगाउँदा सहज र खुकुलो, प्लाजो सेट विशेषगरी २५ देखि ५० वर्षका महिलाले रूचाउँछन्।
२. लङ स्ट्रेट कुर्तीः
लङ स्ट्रेट कुर्तीको ट्रेन्ड कहिल्यै बाहिरिएन। पहिले कुर्ती मात्रै 'टप्स' नामबाट बजार पाएको लङ स्ट्रेट कुर्ती डिजाइन अहिले सेटमा चल्छ।
घुँडाभन्दा तलसम्म हुने कुर्ती चुरिदार सुरूवाल, जिन्स प्यान्ट, खुकुलो सुरूवाल, लेगिंस् वा धोती सुरूवालसँग लगाउन मिल्छ। कपडाको प्रकारअनुसार यो कुर्ती हरेक कार्यक्रम तथा पर्वमा लगाउन सकिन्छ भने घर बस्दा सजिलो सुरूवालसँग लगाउन सकिन्छ। लङ स्ट्रेट कुर्ती अचेल युवा वर्गमा बढी चलेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
अहिले यो लुगा प्यान्ट स्टाइल कुर्ती नामबाट पनि बिक्री हुन्छ।
३. पटियाला कुर्ती सेटः
यो सेटको कुर्ती घुँडाभन्दा मासथि र कम्मरभन्दा हल्का तलसम्म हुन्छ। यसको सुरूवालमा मुजाहरू हुन्छ। पटियाला कुर्ती सेट लगाउँदा सहज र हेर्दा क्लासिक देखिनाले प्रायः घर सम्हालिरहेका महिलाको रोजाइमा बढी पर्ने व्यापारीहरूको अनुभव छ।
दसैंमा घरको काम थुप्रो पर्छ भने यो डिजाइनको कुर्ती सिलाए पनि हुन्छ है! हिँड्दा र काम गर्दा सजिलो हुनुका साथै यो कुर्ती हेर्दा निकै राम्रो देखिन्छ।
४. प्रिन्टेड कुर्तीः
यति बेला बजारमा साधारणभन्दा प्रिन्टेड (बुट्टेदार) कुर्ती बढी चल्छ। विभिन्न डिजाइन र रंगिन प्रिन्ट भएको कपडाको कुर्तीले केही समययता राम्रो बजार लिइरहेको छ। विभिन्न रङ मिसिएको कपडा जस्तै रातो र कालो, कुर्तीमा पनि ग्राहकको आकर्षण बढ्दो छ।
यो जिन्स प्यान्टसँग लगाउँदा राम्रो देखिन्छ भने इच्छाअनुसार चुरिदार, पटियाला, लेगिंसमा पनि लाउन मिल्छ।
५. सरारा कुर्तीः
हेर्दा लङ स्ट्रेट कुर्ती डिजाइन जस्तै देखिने सरारा कुर्ती सेटको सुरूवाल खुलेको हुन्छ। तल्लो भाग मात्र हेर्दा यो कुनै लेहेंगा भन्दा कम देखिँदैन। घुँडाभन्दा हलुका तलदेखि यसको सुरूवाल बेल बटम जिन्सको जस्तै हुन्छ।
आफ्नो इच्छा अनुसार कुर्ती भने छोटा/लामो बनाउन सकिन्छ। यो खालको कुर्ती सेटमा प्रायः सल हुन्छ। तर नलाए पनि राम्रो देखिन्छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज १८, २०७८, २०:१६:००
आज सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीको घट्यो
प्रतितोला तीन सय रुपैयाँ घट्यो सुन
घट्यो सुन-चाँदीको भाउ, कतिमा हुँदैछ कारोबार?